Nagarik Shukrabar - ठग्ने हक माग्दै हलवाला
सोमबार, ०७ जेठ २०७५, १० : ०७
ठग्ने हक माग्दै हलवाला
बिहिबार, १३ बैशाख २०७५, ०६ : २३ | शुक्रवार
सरकार बक्सअफिस लागू गर्ने पक्षमा छ । उता हलवालाहरु जुनसुकै हालतमा बक्सअफिस रोक्ने पक्षमा छन् । यता निर्माता संघ आन्दोलनको तयारीमा छ । आखिर के चक्कर हो यो बक्स अफिसको ? शुक्रवारकर्मी अनिल यादवले खोतल्ने प्रयास गरेका छन्।
निर्माता संघको पछिल्लो भेलाले भने काठमाडौं उपत्यकाको ठाउँमा नेपालभर भन्ने शब्द राखी सो सम्झौता अक्षरशः पालन हुनुपर्ने माग गरेको छ । अर्थात् अब नेपालभरि नै सिनेमा हलको स्तरअनुसार निर्माता र हलवालाले ६० प्रतिशतसम्मको सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने माग निर्माता संघले राखेको छ । यससँगै फिल्म हलमा बजाइने ट्रेलर, पोस्टर, स्थानीय पब्लिसिटी खर्चमा समेत निर्माता एकतर्फी रुपमा मर्कामा परेको निर्माता भेलाको ठहर छ ।
त्यस्तै सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र बक्सअफिस कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई दबाब दिने निर्णय पनि संघले गरेको छ ।
निर्माता र हलवालाबीच कसरी आम्दानी बाँडफाँड हुन्छ ? यो धेरैलाई चासो रहने विषय हो यो । धेरैलाई थाहा नहोला फिल्मको ग्रस कलेक्सन नै निर्माताको हातमा पुग्ने रकम होइन । यति एउटा फिल्मले १ करोडको ग्रस कलेक्सन गर्याे भने त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत चलचित्र विकास शुल्क कटाएर बाँकी रहेको रकममध्ये सिनेमा हल र चलचित्र निर्माताबीच ५०–५० प्रतिशतको सेयर बाँडफाँड हुन्छ ।
'निर्णय भइसक्यो, अब सरकार पछाडि फर्कंदैन'
–गोकुल बाँस्कोटा,सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री
यातायात सिन्डिकेट तोड्न सक्रिय भएको सरकार हलवालाको सिन्डिकेटविरुद्ध निरीह देखियो, फरक व्यवहार किन ?
व्यवहार त्यस्तो होइन । यसमा सरोकारवालालाई हामीले अब बक्सअफिस लगाउने सवालमा आलाटाल, ढिलासुस्ती हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दिइसकेका छौं । बक्सअफिस सुरु गर्न आवश्यक ‘इक्विपमेन्ट’ फिट गर्न हामी थोरै समय दिन तयार छौं तर सरकारले निर्णय गरिसकेको कुरामा अब पछाडि फर्कदैन । हामी केही समय दिन्छौँ तर लामो समय कुर्दैनौ ।
भनेपछि सरकार हलवालासँग डराएको होइन ?
हामी नेपाली फिल्म उद्योग पारदर्शी बनाउने कुरा गरिरहेका छौं । फिल्म उद्योग फस्टाउने कुरा गरिरहेका छौं । फिल्मलाई एउटा उद्योग नै मानिसकेपछि लगानी सुरक्षित गर्ने कुुरा, व्यापार पारदर्शी गर्ने कुरा, ट्याक्स अनलाइनमा आउने कुरा त झन् राम्रो हो नि ! त्यसैले हल सञ्चालकका सही गुनासा सुन्न हामी तयार छौँ तर हाम्रो सिस्टमलाई नै ढिला गर्ने कुरा मान्य हुने छैन ।
केही हलवालाले सरकारको निर्णय नमान्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरुप्रति सरकारको व्यवहार के हुन्छ ?
अहिलेसम्म ५–६ वटा हलले सामग्री जडान गरेर आन्तरिक अभ्यास थालिसकेका छन् । अब रह्यो मान्दिनँ भन्ने । हलवालाले त्यसो गरे उहाँहरुको आम्दानीको स्रोत के ? फिल्मवालाले फिल्म बनाएनन् भने हलवालाले के चलाउँछन् ? सबै बाहिरको फिल्म मात्र ल्याएर त हुँदैन होला । कार्यान्वयनमा आएपछि मान्ने÷नमान्ने त्यतिबेला थाहा होला । त्यस्तो अवस्था आउँदा मान्नु भएन भने सरकारले पनि उहाँहरुले गरेको कुरा मान्दैन ।
केही हलवालाहरु राज्यले भनेजस्तो बक्सअफिस सिस्टम लागू हुँदा व्यवसाय गर्ने अधिकार हनन् हुने तर्क गरिरहेका छन् । जबरजस्ती लाउन खोज्नु गैरकानुनी हो भन्दैछन् । के भन्नुहुन्छ तपार्ईं ?
हामीले कसैको व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध लाउन खोजेको भयो पो हनन् हुन्छ । व्यवसाय गर तर खुला तरिकाले गर, पारदर्शी गर भन्दा व्यापारीलाई कसरी घाटा हुन्छ ? उहाँहरुको मात्र अधिकारको कुरा होइन होला, यहाँ नागरिक र सरकारको पनि अधिकारको कुरा उठ्ला । हामीले सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजेको हो । फेरि यहाँ व्यावसायिक सुरक्षाका कुरा पनि त छन् । निर्माताको सुरक्षाको कुरा पनि त छ ।
केही हलवालाको राज्यले बक्सअफिस भनेकै बुझेको छैन भन्नेसम्मको आरोप छ नि ?
बक्सअफिस भनेको पाँच जनाको बक्स पक्कै होइन होला । इ–टिकेटिङ गर्ने कुरा हो । आम्दानी पारदर्शी गर्ने विषय हो । उहाँहरुले सरकारसँग पारदर्शीको आशा गर्न हुन्छ भने सरकारले उहाँहरुसँग आशा किन नगर्ने ?
केही हलवाला, ‘हामी पारदर्शी गर्छौं तर राज्यको सर्भरमा हाम्रो कारोबार सिधै पुग्ने भयो भन्ने कुरामा हाम्रो गुनासो हो’ भनिरहेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
त्यो त झन् राम्रो हुने भयो । सोझै त्यही दिन कर प्रणालीमा जोडिन पाइयो । झन् सजिलोसित हिसाबकिताब हुने भयो, पुग्ने भयो । राज्यले कमाए जति जम्मै आफैँ राख्छु त भनेको छैन । राज्यले तोकेको नियमअनुसार लिने हो । संसारमा हुँदै नभाको कुरा गर्न खोजेको पनि होइन हामीले । उस्तै कुरा गर्ने हो भने हलवालाले पनि दर्शकको इच्छा हुँदाहुँदै एउटा उतारेर अर्को फिल्म हाल्देका उदाहरण पनि छन् । यो मनोमानी होइन ?
‘बक्सअफिस सम्भव छैन’
–भाष्कर ढुंगाना, संचालक, क्युएफएक्स
तपाईं राज्यले लागु गर्न खोजिरहेको बक्सअफिसको विरुद्धमा उभिनुभयो नि ! किन ?
चलचित्र विकास बोर्ड राज्य हो कि होइन दुविधामा छु । जसको अध्यक्ष व्यापारी नै हुनुहुन्छ, यो अद्र्धसरकारी जस्तो भयो । एउटा व्यवसायी पदमा बसेको छ र अरुको व्यवसाय हेर्छु भनिरहेको छ । कुन देशमा हुन्छ यस्तो ? मेरो नजरमा यो त पूरै गैरकानुनी हो । कि कतै यस्तो हुन्छ भने उदाहरण दिनु पर्याे । राज्यले कानुनसम्मत गर्छ भने ठीकै छ नत्र म मान्दिनँ ।
भनेपछि अहिले राज्यले लगाउने भनेको बक्सअफिस प्रणाली कानुनसम्मत होइन ?
यो कानुनसम्मत छैन । त्यसैले मुद्दा लड्ने कुरा पनि भइरहेको छ । हामी सबै हलमा इ–टिकेटिङ हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । तुरुन्तै हिसाब दिनुपर्छ पनि भनिरहेका छौं तर यो राज्यले भनेजस्तो बक्सअफिस सम्भव छैन । हाम्रो वकिलसँग कुरा पनि भा’को थियो । मुद्दा लड्दा सजिलै जित्छौँ भन्ने कुरा छ तर यसो हुँदा केही हलहरुले इ–टिकेटिङ नै नलगाइदेला भन्ने समस्या देखियो ।
राज्यले त्यो सिस्टम ल्याउँदा तपाईंहरुलाई के असर पर्छ ?
केही पनि असर पर्दैन । बस्, हाम्रो व्यवसाय गर्ने अधिकारमा हनन् हुन्छ । अन्य कुनै क्षेत्रमा यस्तो छैन, फिल्म क्षेत्रमा मात्रै किन ? म चोर हुँ र ? मलाई मात्र किन गर्ने ? चोर हो भने दण्ड दिनुप¥यो । पानवालाकोमा गएर मलाई दैनिक पान बेचेको हिसाब दिनुस् भन्न पाइन्छ ? यस्तो भयो भने त्यो त अराजक समाज हुन्छ ।
सायद राज्यलाई तपाईंहरुप्रति विश्वास लागेन होला !
विश्वास नलागेको भन्न पाइन्छ ? हाम्रो मर्यादामा ठेस लाग्दैन ? जसरी लाउँछु भनेर हुँदैन, बक्सअफिस कानुनसम्मत मात्र लाउन पाइन्छ । अस्ति भर्खर सरकारले निर्णय गरेका कति काम उल्टेका छन् यहाँ । यत्ति हो, कानुनसम्मत छ भने हामीलाई केही समस्या छैन । अहिले विकास बोर्डले परिकल्पना गरेको सिस्टम कानुनसम्मत छैन भन्ने लाग्छ । त्यसैले जबरजस्ती गर्न खोज्दा हामी अदालत जान्छौं । अदालतले पनि कानुनसम्मत भन्दियो भन्ने मान्न तयार हुन्छौ।
सेयर बाँडफाँडमा हल सञ्चालकले निर्माताहरुलाई ठगेको आरोप लागिरहेको छ । यसविरुद्ध निर्माता संघले आन्दोलनमा जाने धम्की दिइसकेको छ । के भन्नुहुन्छ ?
ठगेको हो भने कहाँ ठगेको पुष्टि गर्नुभयो ? नत्र पुलिस प्रशासनमा जानुप¥यो । ठगीको मुद्दा हेर्ने पुलिस प्रशासनले हो, मैले होइन ।
सिनेमा हलमा राखिने होर्डिङ बोर्डको पैसासमेत तपाईंहरु निर्माताबाट असुल्नुहुन्छ भन्ने छ । यो त निर्मातामाथि सरासर अन्याय भएन र ? आफ्नो हलमा प्रदर्शन हुने फिल्मको प्रचार गर्नु तपाईंहरुको पनि दायित्व होइन ?
हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार व्यापार गर्छौं । ब्यानर, टिकट रेट सबै सम्झौताअनुसार हुन्छ । हाम्रो सम्पूर्ण लेनदेन निर्मातासँग होइन, वितरकसँग हुन्छ । चित्त बुझेन भने हल र वितरक दुवैलाई हलमा फिल्म लगाउनुपर्ने दबाब हुन्न । त्यसैले यस्तो गुनासो गर्नुको अर्थ छैन । नत्र मलाई थोरै पैसा आयो, त्यसैले यो गलत भयो भन्नुप¥यो कि कारण भन्न सक्नुपर्याे । रह्यो, दायित्वको कुरा, मेरो विचारमा फिल्मको प्रचार गर्नु खास दायित्व वितरकको हो, निर्माताको पनि होइन ।
‘बक्स अफिस नभए फिल्म चल्न दिन्नौं’
–आकाश अधिकारी, अध्यक्ष, नेपाल चलचित्र निर्माता संघ
निर्माताहरु हलवालाबाट पाइलैपिच्छे शोषणमा परेका हुन् ?
यो त क्लियर देखिएकै कुरा हो । निर्माताले लगानी गरेको सिनेमा नचल्दा एकैदिनमा हलबाट निस्कन सक्छ तर जब सिनेमा चल्छ, निर्माताको भाग घट्छ । बक्स अफिस लाउने कुरामा ७ वर्षअघिदेखि नै सम्झौता भएको हो । वैशाख १ सम्म सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने कुरा थियो । त्यो पनि जेठ १ मा स¥यो । बक्सअफिस र सेयर बाँडफाँडको मुद्दामा निर्माता संघ कटिबद्ध छ ।
तर बक्सअफिसको पक्षमा निर्माता संघ कमजोर देखिएको भन्ने कुरा छ नि ?
दबाब दिइरहेका छौं र दिन्छौं । जेठ १ गतेदेखि बक्सअफिस लागेन भने हामी २ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रन्छौं । कुनै पनि भाषाको फिल्म हलमा लाग्न दिने छैनौं । फेरि इ–टिकेटिङ मात्रै भनेर हुँदैन, विकास बोर्डले अहिले भनिरहेको जस्तो अनलाइन सिस्टमको सेन्ट्रल कलेक्सन नै चाहिन्छ । विकास बोर्डको बक्सअफिस लागू गर्ने समितिमा निर्माता संघको तर्फबाट म स्वयम् छु । चलचित्र संघ (हलवाला)को तर्फबाट अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदय पनि हुनुहुन्छ । भोलि राज्यले इ–टिकेटिङ मात्रै भन्यो भने हामी राज्यको खिलाप पनि आन्दोलन गर्न तयार हुन्छौं ।
निर्माताहरूको बृहत् भेलापछि जारी विज्ञप्तिमा सेयर बाँडफाँडको मुद्दा प्राथमिकतामा छ तर बक्सअफिस लागू गराउनेबारे त्यति कडा छैन । बक्स अफिस बढी राज्यको प्राथमिकता ठानेर हो ?
होइन । बक्सअफिसको कुरा वैशाखबाट जेठमा पुगेपछि हामी सशंकित भएका हौं । ५० प्रतिशत बढी हलवाला बक्सअफिस लाउन तयार हुनुहुन्छ । पारदर्शी हुन्छौँ भनिरहनुभएको छ । राज्यले बक्सअफिसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर जडान गर्न आफैँ सहयोग गरिरहेको छ । यसरी खर्च गरिरहेको अवस्थामा अब राज्य पछाडि फर्कने कुरा आउँदैन ।
बक्सअफिस हाम्रो प्राथमिकतामै छ । यो नभई धर छैन । यससँगै हामीले २०६० सालमा ४२ दिनको आन्दोलनपछि काठमाडौं उपत्यकामा चलचित्र प्रदर्शनपश्चात् उठेको कुल रकममा भ्याट कट्टा गरी बाँकी रकममा चलचित्र भवनको भौतिक सुविधा, व्यापार, ठाउँ तथा क्षेत्रको आधारमा निर्माता÷वितरकले ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म र प्रदर्शकले ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्मकोे दरले सेयर रकम लिने दिने सहमति कार्यान्यवयन गर्नुपर्छ भन्ने अर्को माग हो ।
हलमा बजाइने ट्रेलरदेखि पोस्टर र स्थानीय पब्लिसिटी खर्चका विषयमा पनि माग गर्नुभएको छ । यो मागबारे प्रस्ट गरिदिनुस् न ?
दर्शक बोलाउनका लागि फिल्मको पोस्टर हलमा टासिन्छ र दर्शक आउँछन् । त्यसपछि पैसा हलवाला र निर्माताबीच बाँडिन्छ । ट्रेलरको हकमा पनि त्यही नै हो । अहिले हलमा पैसा नतिरी ट्रेलर, पोस्टर राख्न पाइँदैन तर पहिले एक पैसा तिर्नुपर्थेन । अब पहिलेजस्तै हुनुपर्याे भन्ने हाम्रो माग हो ।
निर्माता संघ आफ्नो मागप्रति कतिसम्म कडा रुपमा उत्रन्छ कि सदाझैँ यसपालि पनि लचिलो भइहाल्छ ?
लचिलो हुँदैन । हामीलाई पहिल्यैदेखि सदस्यहरुले बक्सअफिस किन भएन भनेर घच्घचाइरहनुभएको थियो । चलचित्र संघसँग दुईपल्ट वार्ता बसेको पनि हो । केही गर्दा नलागेपछि आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।
शनिबार भएको भेलामा कतिजना निर्माता सहभागी थिए ?
२ सय २५ जनाले निर्माता संघको मागका लागि परेको खण्डमा सिनेमा बन्द गर्न तयार छु भनेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । चलचित्र भवनबिना निर्माता रहँदैनन्, निर्माताबिना चलचित्र भवन रहँदैन । कसैलाई दबाऊँ, कोही माथि परौँ भन्ने होइन । वैज्ञानिक होस् भन्ने चाहना हो ।